Ahoana no hanamboarana rindran-dalana SEO miaraka amin'ny fanampian'ny tranokalan'ny backlink?
Ity lahatsoratra ity dia natao manokana ho an'ireo izay maniry hanangana backlinks kalitao ary hitombo ny fifamoivoizana amin'ny fikaroana organika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tranokalan'ny backlink. Hiresaka momba ny iray amin'ireo tetikasan'ny SEO tsy dia mbola henonao hatramin'izay. Ity fomba iray ity dia ny fananganana ara-dalàna ny lalao nataonao tamin'ny alàlan'ny fanadihadiana momba ny backlink. Manontany tena ve ianao hoe ahoana no ahafahanao mandray soa avy amin'ny mpifaninana ao amin'ny tsenanao? Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mieritreritra ny mpifaninana aminy ho toy ny zavatra sarobidy amin'ny ezaka SEO. Na izany aza, raha manana fomba fijery mahazatra amin'ny raharaha momba ny varotra an-tserasera ianao dia hampiasa mora foana ny fifaninanana fifanintsanana hifaninana aminao.
Alohan'ny handehananay dia ilaina ny mamaly ity fanontaniana manaraka ity: mpifaninana? Azonao atao ny mahazo an'io angon-drakitra io amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana momba ny tsena nafenina. Mba hanamoràna an'ity asa ity dia tsara ny mampiasa fitaovana matihanina amin'ny aterineto toy ny Semalt Website Analyzer na Google Analytics. Samy maimaim-poana ireo fitaovana ireo ary afaka manome anao tahirin-kevitra marina. Avy eo dia mamorona tahadika misy tsanganana roa - "mpifaninana" ary "adiresy tranonkala. "Izao, izao no fotoana hampiasana ny ezaka amin'ny fanorenana rohy amin'ny mpifaninana anao mba hahazoana ny rindran-damba tena tsara indrindra sy voatahiry ho an'ny faritra misy anao.
Mitadiava backlinks ny mpifaninana anao
Mila manara-maso ny rindran-kira TOP competitor ianao amin'ny fampiasana fitaovana araka izay voalaza etsy ambony mba hijanona ho mailo amin'ny fandaharana misy azy ireo sy ny fampielezan-kevitra an-tserasera. Raha te-hanamboatra ity dingana ity ianao, dia afaka mandefa fanamarinana mandeha ho azy ho an'ny mpifaninana tsirairay. Hanome anao fampandrenesana momba ny lalam-baovao vaovao ahafahanao miorina ireo mpifaninana aminao ary ny fiovana rehetra ananany amin'ny fananganana fananganana rohy. Mba hahafantaranao ireo fahafaha-manao vaovao rehetra, dia azonao atao koa ny mametraka fampandrenesana ho an'ny marika famantarana ny mpifaninana aminao. Raha manao izany ianao, dia hahazo fampandrenesana amin'izay fotoana izay ianao no havoaka amin'ny Internet.
Ankoatr'izay dia mila mitazona raki-dahatsoratra amin'ny rohy vaovao manondro ny mpifaninana misy anao ianao ary mikaroka fahafahana hampiroborobo ny votoatinao manokana. Ohatra, ny rohy vaovao ao amin'ny loharanon-tranonkalan'ny mpifaninana aminao dia mety ho toy ny rohy ho an'ny lahatsoratra na lahatsoratra amin'ny blôginao.
Zava-dehibe ny hanamarina raha mitovy amin'ny anao ny rohy na tsia. Raha toa ka izy ireo, mila miezaka manatona ny tranonkala mifandraika ianao ary angataho izy ireo hampidirinao ny lohateninao ho loharano fanampiny.
Misy tombony iray hafa amin'ny fanarahamaso ny rindran-kaonty. Azonao atao ny mandray ny filazana ny mpifaninana aminao tsy misy rohy manokana. Amin'ity tranga ity dia mahazo fahafahana hampiditra ny marikao ianao amin'ny fifaninana ary hahazo ny backlinks vaovao.
Mitadiava loharanon-tranonkala izay manondro mpifaninana mihoatra ny iray
Tokony hijery ireo tranonkala izay manondro mpifaninana mihoatra ny iray ary manandrana mahazo rohy avy amin'ity loharano ity koa. Ireo tranokalan'ny backlink ireo dia mety ho lafatra tsara ho an'ny fanentanana fananganana rohy Source .